काठमाडौं – पुरानो नेपाली उखान छ, ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम ।’ नेपाली कर्मचारीले जनता र राष्ट्रको काम लगनशीलताको साथ गर्दैनन् भन्ने आरोप लागि नै रहेको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले खुलेआम सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग पनि गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि एउटा उदाहरण हेरौं :
साँझको साढे ६ बजिसकेको थियो । काठमाडौं बानेश्वरबाट शंखमुलतर्फको ओरालोमा दायाँ–बायाँ लस्करै सरकारी गाडी र मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राखिएको थियो ।
साँझको बेला के सरकारी कार्यक्रम रहेछ यहाँ ? हामीले सोच्यौं । बुझ्दा त्यहाँ कुनै सरकारी कार्यक्रम र कार्यालय केही रहेन छ ।
बरू त्यहाँ त लोकसेवाको परीक्षा तयारीसम्बन्धी पढाइ हुने चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्था रहेछ । त्यहाँ साँझ कार्यालय समय सकिएपछि कर्मचारीहरू पढाउन र पढ्न आउने रहेछन् ।
नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यालय समयमा कार्यालय प्रयोजनका लागि ती सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ तर त्यहाँ कर्मचारीहरूले आफ्नो नितान्त व्याक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका थिए ।
सरकारी कर्मचारी आफ्नो कक्षामा गएका थिए, तर सवारी चालकहरू भने उनीहरूको प्रतिक्षामा गाडीमा नै बसिरहेका थिए । गृह मन्त्रालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरू सरकारी गाडी लिएर त्यहाँ लोकसेवा तयारीका लागि कक्षा लिन आएको गाडीका चालकले बताएका थिए ।
हामीले सवारी चालकलाई सोध्यौं, यति रातिसम्म काम गरेपछि तपाईंलाई छुट्टै सेवा सुविधा दिन्छन् ? सवारी चालकले आफूहरूले त्यस्तो केही नपाउने बताए । कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गराएर कर्मचारीले सवारी चालकको श्रम शोषण गरेको पनि थाहा भयो ।
कर्मचारीहरूको कक्षा नसकिएसम्म हामी अबेरसम्म बस्यौं । साँझको ७ बजेतिर कर्मचारीहरू निस्किए । कर्मचारीहरू आ–आफ्नो सवारी साधन भएको ठाउँतिर आए । हामीले केही कर्मचारीलाई सोध्यौं कार्यालय समयभन्दा बाहिर यसरी सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
गाडी चढ्ने कर्मचारीले ‘हाम्रो अफिसमा आएर कुरा गर्नुस्, यहाँ होइन’ भनेर ठाडो जवाफ फर्काए । हामीले उनको जवाफ भिडियोमा कैद गर्ने प्रयास गर्‍यौं । उनले अनुमतिविना भिडियो नखिच्न अनुरोध गरे ।
ट्राफिक प्रहरीसँग पनि मिलेमतो !
बानेश्वर चोकबाट शंखमुल जाने सडक जाँदा ओरालो–उकालो र घुम्ती समेत छ । जोखिमयुक्त बाटोमा सामान्यतया पनि सवारी पार्किङ गर्न पाइँदैन र पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ ।
मन्त्रालयका विभिन्न उच्च तहका कर्मचारी पढाउन आउने र पढ्न आउने ठाउँ भएर होला सडकको दायाँ–बायाँ नै पार्किङ गर्ने सुविधा ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ ।
एक सवारी चालकका अनुसार शंखमुल पुलदेखि घुम्तीसम्म ट्राफिक प्रहरी आउँछ, त्यहाँबाट माथि आउँदैन । कर्मचारी र इन्स्टिच्युटसँग ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतो भएर यस्तो सुविधा दिएको हुनसक्ने ती सवारी चालकले बताए ।
ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता रविकुमार पौडेलले त्यहाँ पार्किङ गर्ने सुविधा नभएको, रातिको समयमा त्यस क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको ड्युटीको अभावमा निगरानी नपुगेको हुन सक्ने बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले त्यस क्षेत्रको कमान्डरलाई सोधेर मात्र थप कुरा भन्न सक्ने बताए । मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न कार्यालयका सवारी साधनको दुरूपयोग भइरहँदा सम्बन्धित पक्ष किन मौन छ ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव डालनाथ अर्याल भन्छन्, ‘कार्यालय समयभन्दा बाँकी समयमा कर्मचारीले कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन प्रयाग गर्दा सम्बन्धित निकायको प्रमुखबाट स्वीकृति लिुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति नलिई सरकारी सवारी साधन सञ्चालन गरेमा नियमअनुसार कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।’
फोटो/भिडियो : सुरेन्द्र श्रेष्ठ/लोकान्तर